April | 2019 | HimiloNetwork
Daawo – Nin – isaga oo isticmaalaya qalabkiisa beer-falka – bulshadiisa u sameeyey waddo ay adeegsadaan.
Himilo April 28, 2019	Leave a comment 292 Views
MUQDISHO (HN) — Mararka way dhacdaa inaad maqasho ballamaha ay dowladi u qabato dadweynaheeda. Balse waxaa yar inta yar ee kasoo naasa-cadaada fulintooda. Qaar badan ayaa markii ay ka quustaan ballamaha aan dhaboobeyn ee dowladda waxay ku qancaan inay ka dhursugaan mustaqbalka. Balse dad badan, sida Nicholas, oo ku nool miyiga dalka Kenya, wuxuu qaatay go’aan ka duwan midkaas. Wuxuuna ...
Himilo April 28, 2019	Leave a comment 228 Views
NAIROBI (HN) — Sameynta jid waxaa Ku baxa qarash badan sidaa daraadeed in shaqsiyan loogu dhiirado ma badna balse 45 jir ku nool Kenya waxa uu keligii sameeyay waddo dhererkeedu yahay hal mile isagoo isticmaalaya qalab yar yar. Sida laga arkay muuqaal laga soo duubay waxa uu falidda/qodidda wadadaas u adeegsaday agab aan loogu tata-gelin oo ay awoodiisu yar tahay ...
Himilo April 25, 2019	Leave a comment 716 Views
MUQDISHO (HN) — Sebastião Ribeiro Salgado, waa sawir-qaade hore iyo suxufi reer Brazil ah, hayeeshe in yar ayaa og inuu sidoo kale yahay maskaxdii ka danbeysay mid kamid ah mashaariicdii dhir-beeris ee lagu liibaanay taariikhda casriga ah. Si mid ah isaga iyo afadiisa, Salgado wuxuu guntii ku guuleysteen inay beeraan malyuun geedo ah muddo 20 sanno ka badan. Qisada Instituto ...
Himilo April 25, 2019	Leave a comment 285 Views
MUQDISHO (HN) — Arday walba malahan doorasho aan ka aheyn inuu naftiisa ka taxadaro marka uu ku sugan yahay goobtiisa wax-barashada, marka laga reebo Xu Bingyang kaas oo saaxiibkiisa naafada ah maalin walba ku xinbaara dushiisa. Halkan haddaba ka daawo muuqaal laga diyaariyay.
Himilo April 25, 2019	Leave a comment 515 Views
BEIJING (HN) — Wiil laba-iyo-toban jir ah oo ku nool Meishan, dalka Shiinaha ayaa lagu tilmaamay halyey sababtii uu ugu suura-geliyay saaxiibkiisa cuuryaanka ah oo ay isku fasalka yihiin awgeed inuu wax-barashadiisa kaga caawiyo isaga oo kusoo xanbaaraya dushiisa maalin walba. Lixdii sannadood ee lasoo dhaafay wuxuu subax walba saaxiibkiisa naafada ah kusoo xanbaaraa dushiisa isaga oo usoo kaxeynaya dugsiga ...
Ugaarsadihii sabab la-yaab leh ku toogtay 5,000 oo Maroodi.
Himilo April 25, 2019	Leave a comment 364 Views
Harare (HN) — Ron Thompson oo u dhashay dalka Zimbabwe waa ugaarsade ilaa iyo hadda inta la og yahay dilay in ka badan 5,000 oo Maroodiyaal ah; boqolaal lo’ kisi ah, iyo duurjoog kale oo tira badan intii uu ku jiray noloshiisii ugaarsinimada oo ku dhow 50 sannadood. Dhawaan wuxuu sheegay inuusan isku heysan danbiile; mana qabo sabab uu ku ...
Ninkii fadhiyay 50 saacadood oo xiriir ah oo uu ku dhacay cudurka Qalalka.
Himilo April 25, 2019	Leave a comment 259 Views
MUQDISHO (HN) — 42-jir ku nool dalka Shiinaha ayaa waxaa haleelay cudurka Qalalka kaddib markii uu 50 saacadood oo xiriir ah dul fadhiyay kursiga – isaga oo adeegsanaya qadka. Marka loo eego kaamirada CCTV, ninkan ayaa soo galay xarunta March 31 kamana uusan tagin isla goobta 50 saacadood ee ku xigay. Waxay aheyd kaliya markii shaqaalaha xarunta ay dib u ...
Da’yar Fartiisa u jaray Xisbi uusan dooneyn oo uu u codeeyey awgeed.
Himilo April 25, 2019	Leave a comment 282 Views
DELHI (HN) — Pawan Kumar, oo 25 jir ah, kuna nool gobalka Uttar Pradesh dalka Hindiya ayaa si ula-kac ah isaga jaray suulkiisa kaddib markii sida la sheegay uu ugu codeeyey musharrax uusan rabin inuu codkiisu ugu deeqo. Kumar ayaa sheekadiisa waxay noqotay mid ku baahday baraha bulshada Hindiya iyo dunida oo dhan isaga oo faashad ku xirtay gumadka suulkiisa. ...
Simon Lee – Aqoonyahankii iskiis u doortay Nolosha Darbi-jiifnimada.
Himilo April 25, 2019	Leave a comment 306 Views
MUQDISHO (HN) — 52-jirka lagu magacaabo Simon Lee wuxuu toddobadii sanno ee lasoo dhaafay seexan jiray gidaaradda Hong Kong laakiin sida darbi-jiifta kale majirto sabab dabiici ah iyo mid duruufo nololeed ah oo ku qasabtay inuu noqdo dibjir. Xaqiiqdii waa isaga midka doortay inuu u noolaado sida darb-jiifka. Wuxuuna isaga oo soo tagay shaqadii uu qabsan jiray iyo wixii uu ...
La kulan – Lammaanayaashii dhul cidlo ah u beddelay Keyn laga helo Noolaha oo dhan.
Himilo April 20, 2019	Leave a comment 391 Views
DELHI (HN) — Sannadkii 1991-kii, Anil iyo Pamela Malhotra waxay iibsadeen goof yar oo cabbirkiisu la’eg yahay 55 acres oo ku yaalla Karnataka – iyaga oo bilaabay inay ku beeraan geedaha asal ku ah degaanka. Hadda in ku dhow 30 sannado kaddib, goofkii yaraa wuxuu isku rogay keyn yar oo kulmisa noolaha kala duwan sida duur-joogta dabargo’a ku sugan, dhirta ...